Ukuxhasa kunye nokumelana kwi-Ibex 35 | Ezezimali
Ukuxhasa kunye nokumelana kwi-Ibex 35
Akukho namnye kwiiarhente zezemali othandabuzayo ukuba isalathiso esikhethiweyo sengeniso eyahlukileyo, i-Ibex 35, ikwi- imeko ecacileyo yexesha elizayo. Oko kukuthi, kumhlaba womntu okoko nje amanqanaba enkxaso kunye nokuchasana athabatha okuninzi ukuwisa awugqithi. Okwangoku, kunzima kakhulu ukwenza imisebenzi yokuqonda ukonga, ngaphandle kokuba imisebenzi yokurhweba inamava. Ngaphandle kwento yokuba akukho mntu uthandabuzayo, kungekudala okanye kamva, awuzukukhetha ngaphandle kokuthatha indawo okanye enye kwindawo yokuthenga okanye yokuthengisa.
Kule meko ngokubanzi, siza kuchaza ukuba zeziphi iindlela zotyalo-mali onokungenisa kuzo ukusukela ngoku. Ukuze ngale ndlela, ubekwimeko yokwandisa imisebenzi yakho kwiimarike zezabelo. Apho uloyiko lokudodobala kwezoqoqosho kwinqanaba lamazwe aphesheya, alithandabuzeki elokuba liyakudlala indima ebalulekileyo kwizalathiso zentengiso yemasheya landela enye okanye enye into. Ukuze imarike yesitokhwe sikazwelonke ikwazi ukuphuma kwimeko yangoku yexesha ebelikuyo kwiinyanga ezininzi.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba okoko la manqanaba engagqithiyo, akukho nto inokwenziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwaye emazantsi ayo asekiwe phakathi kwamanqaku ayi-8700 kunye nama-8600 nakwinxalenye yokuqhubela phambili yejelo kufutshane namanqaku angama-9300 okanye njalo. Nakuyiphi na imeko, amanqanaba ekuya kufuneka abekwe esweni ukusukela ngoku. Ukuze uvule izikhundla kwicala elinye okanye kwelinye kwaye ungasikelwanga mda kwimisebenzi emifutshane eyenziwe kumjelo wexesha elizayo njengaleyo sizifumanayo ngayo ngoku.
1 Kufuneka wenze ntoni xa usasazo lweendaba?
2 Thatha phantsi ukumelana nengxowa
3 Xa iintshukumo zobuxoki zenzeka
4 Bafumane kwangexesha
Kufuneka wenze ntoni xa usasazo lweendaba?
Ukuba kwiintsuku ezizayo okanye kwiiveki kukho ikhefu elinamandla kumthamo wokurhweba wesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, iya kuba sisihlandlo sokuba sonke silinde ukuthengisa izikhundla zethu kwimarike yemasheya. Ngokurhoxa ngokupheleleyo ngesizathu esicace gca kwaye oko kukuthi siza kuba namathuba okuthenga izabelo ngamaxabiso okhuphiswano ngakumbi. Ke ngale ndlela, ukubanakho ukuphinda kujongwe kuphezulu kakhulu kunangoku. Oko kukuthi, ukunyusa ngokubonakalayo inzuzo eyinkunzi kwimisebenzi evulekileyo kwiimarike zezemali.
Esi sicwangciso sotyalo-mali sithatha umngcipheko omncinci, kodwa ngaphezulu kwako konke siya kusinceda sikhusele ulondolozo lwethu kwi ukungazinzi kwiimarike zokulingana. Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha ezingangenanga ngoku okanye eziyinxalenye yohlalutyo lwethu lwenkxaso kunye nokuxhathisa kwi-Ibex 35. Akumangalisi ukuba le meko ingakhokelela kwisalathiso semarike yestokhwe saseSpain ukuba sihlolisise inqanaba lama-8000 amanqaku okanye imida ephantsi. Ngomngcipheko ocacileyo kwizikhundla zethu kwiimarike zezabelo.
Thatha phantsi ukumelana nengxowa
Ngelixa ngokuchaseneyo, intshukumo echaseneyo, oko kukuthi, ukugqitha kwinqanaba lokumelana ne-Ibex 35 okwangoku ngumqondiso ocacileyo buya uyokuthenga kwiparagidi yaseMadrid. Kuba, inokuba linqanaba apho unokuphinda uqalise khona utyalomali kwizabelo. Ngokusisiseko kuba umngcipheko uya kuba sezantsi kwaye uya kuba ulunge ngakumbi kunangaphambili. Ngale ndlela, ayinakulityalwa nangayiphi na indlela kuxa kugqityiwe ukuxhathisa, iba yinkxaso evela kulomlo.
Ngapha koko, emva ngokulula woyise ukuxhathisa ngokukhululekileyo, into yesiqhelo kukuba kukho uxinzelelo lokuthenga olunamandla kakhulu. Apho umdla kwinxalenye yabancinci naphakathi ubalasele kakhulu, ubuncinci kwezi veki zilandelayo apho kwenzeke khona lo msebenzi. Kwaye inokusetyenziswa ngabahlanguli ukuthatha izikhundla kwaye benze inzuzo kwezi ntshukumo zikhethekileyo kwiinqobo ezihamba kule meko. Apho umthetho wesithupha kukuba kuninzi okuzuzayo kunokulahleka.
Xa iintshukumo zobuxoki zenzeka
Kungenzeka kwakhona, nangona kungenjalo, ukuba ezi ntshukumo ekuguqulweni kwamaxabiso zibuxoki. Oku kuthetha ukuba babuyela kwizikhundla zabo zokuqala kwaye ke ngoko akukho lwaphulelo lwenkxaso okanye ukumelana. Kwaye ke kwimeko apho, izicwangciso esixoxe ngazo ngasentla ziya kuba lilize. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuya kufuneka ukuhlengahlengisa ukuthengisa okanye ukuthengwa, ngokulandelanayo, kuba oko kunokubandakanya ubungozi obuninzi ekusebenzeni. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwiziseko zayo.
Enye into abatyali mali abancinci naphakathi abayixabisileyo ngumthamo wesivumelwano. Kuba okunene, ezi ntshukumo zihlala zihamba kunye Imithamo yokuthenga ziphezulu kakhulu kwaye zezo zinika isiseko sokwaphuka kwenkxaso kunye nokuchasana kuhlalutyo lobuchwephesha lwamaxabiso emarike yemasheya. Ukuthembeka okuphezulu malunga neziphumo zale nkqubo kwaye kulandelwa ngabatyali mali abanokufunda okukhulu kolu hlobo lomsebenzi kwimarike yemasheya.
Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba kubaluleke kakhulu ukuba ngexesha lokutshintsha kweendlela kumaxabiso. Kuba ukuba zibhaqwe kade kuya kuba nzima uzuze kwezi meko ukwenza imali etyalwe ngenzuzo. Ekupheleni kosuku yintoni ebandakanyekayo kolu didi lwezicwangciso zotyalo-mali. Ayothusi into yokuba ubumnandi kwiintshukumo zithatha isigqibo esigqibeleleyo sokuvelisa eyona nzuzo inkulu inokubakho ngalo lonke ixesha.
Kule nto, kuya kuba kufanelekile ukuba ube negrafu esesandleni ukuze wazi okwenzekayo ngamaxabiso esitokhwe ngalo lonke ixesha okanye ubuncinci kwiseshoni nganye kwiimarike ze-equity. Ngamathuba amakhulu okufezekisa iinjongo zethu ngendlela efanelekileyo kwaye ukuba ingabinabungozi. Ngaphandle koloyiko lweempazamo zokubaluleka okukhethekileyo kutyalo-mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukuxhasa kunye nokumelana kwi-Ibex 35
Amathuba otyalo mali kubulungisa
Ngaba lixesha lokutyala imali kwiimarike ezisakhulayo?